यी हुन् ‘समर लभ’ का अतित र साया : के पाउलान् दर्शकको माया ? « Mazzako Online
यी हुन् ‘समर लभ’ का अतित र साया : के पाउलान् दर्शकको माया ?
अन्ततः सुबिन भट्टराईको लोकप्रिय उपन्यास ‘समर लभ’ माथि फिल्म बन्ने पक्का भएको छ । आईतबार औपचारिक कार्यक्रमका बिच फिल्म निर्माण र फिल्मका मुख्य पात्र अतित र सायालाई सार्वजनिक गरियो । मुस्कान ढकालले निर्देशन गर्ने ‘समर लभ’ मा अतितको भूमिका आशिष पिया र सायाको भूमिका रेवती क्षेत्रीले निभाउँनेछन् । आशिष र रेवती दुवै नयाँ अनुहार हुन् ।
केहि टिभिसी र पेपर एडमा मोड्लिङ गरेका आशिषले अतितको रुपमा अभिनय गर्ने छन् भने साया अर्थात् रेवतीले भारतमा मोड्लिङ गरेकी छिन् । उनले रेवतीले ‘ग्याङग्स अफ नर्थ वेस्ट’ नामक भारतीय फिल्ममा अभिनय समेत गरिसकेकी छिन् । ‘खातुन’ नामक भारतिय फिल्ममा चाँडै अभिनय गर्ने रेवती बिभिन्न सौन्दर्य प्रतियोगितामा बिजेता भैसकेकी छिन् ।
फिल्मका बाँकी कलाकारहरु छनौट हुंन बाँकी रहेको निर्देशक ढकालले बताए् । सामिप्यराज तिमल्सिनाको पटकथा तथा संवाद रहेको फिल्ममा संगीत पुष्पन प्रधानको रहने गीतहरु भारतमा रेकर्ड हुनेछन् । ‘समर लभ’ बैशाखको दोस्रो साताबाट फ्लोरमा जानेछ । नाईटिंगेल इन्टरटेनमेन्ट को ब्यानरमा बन्ने फिल्मलाई भरत शर्मा, सपन सरकार, इन्दु भण्डारी र मनु बिकले मिलेर बनाउन लागेका हुन् । कार्यकारी निर्माता बिनोद अधिकारी हुन् ।